Rasmi: Filimada 2.0 iyo Thugs Of Hinduston oo shaaca laga qaaday xiliga China laga daawanayo – Filimside.net
Rasmi: Filimada 2.0 iyo Thugs Of Hinduston oo shaaca laga qaaday xiliga China laga daawanayo
December 5, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: December 5, 2018
Suuqa China wuxuu noqday mid ay ganacsi wacan ka sameeyaan aflaanta Hindiga ah waxaana haatan shaaca laga qaaday labada filim ee Hindiya ugu weyn 2.0 iyo Thugs Of Hinduston xiliga China laga daawan doono.
Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Katrina Kaif iyo Fatima Sana Shaikh filimkooda TOH waxay la sheegay in 28 Dec 2018 ama bishan dhamaadkeeda gudaha China laga daawan doono.
Inkastoo filimka TOH ganacsi liito gudaha Hindiya ka sameeyay hadana waxaa lagu kalsoon yahay suuqa China inuu ganacsi heer sare ah ka sameyn karo madaama Aamir Khan dhul weynaha China shacbiyad balaaran ku leeyahay.
Dhinaca kale filimka weyn 2.0 ee haatan tiyaatarada saaran sidoo kalena Rajinikanth, Akshay Kumar iyo Amy Jackson hogaamiyaal ka yihiin ayaa la xaqiijiyay in China laga daawan doono May 2019 balse maalin gaar ah weli looma asteenin.
Waa arin wanaagsan labada filim Hindiya ugu weyn in suuqa China la saaro waxaana la wada sugi doonaa mid walbo ganacsiga uu sameyn doono.
Dhinaca kale haatan tiyaatarada China waxaa saaran filimka 102 Not Out oo Amitabh Bachchan iyo Rishi Kapoor kaasi oo ganacsi gaabis ah halkaas ka sameenayo mudo afar maalmood xogtiisa ganacsiga la heli karo suuqa China wuxuu ka keenay $ 3.56 mn [₹ 25.06 cr].
Akshay Kumar filimkiisa Pad Man oo sheeko ahaan aad loo amaanay bilawgii sanadkana gudaha Hindiya laga daawaday ayaa lagu wadaa in 14-ka bishan December tiyaatarada China la saaro waana mashruuc haweynta reer China siweyn u xiiseenayaan inay daawadaan.
Waxaa Aqrisay 484
wll waxaan ku weydiiyey goormaa filimka zero ee srk laga daawanayaa china.
Weli lama shaacin marka gudaha Hindiya 21-ka bishan laga daawado kadib ayaan ogaan doonaa insha Allah.
waad mahadsantahay wll waxaan ku weydiin lahaa oo kale imisa wadan ayaa
lga daawadaa aflaamta hindiga ah mar walba
Hadda wadamo badan ayaa laga daawadaa.